Shiinaha warshad mashiinka duubaya oo adag oo sanduuq adag | Sunkia
238 taxane ah oo si toos ah saxaafadda xumbada xarkaha u leh waa shirkadeena horumarinteedii ugu horeysay iyo soo saarida sanduuqa cusub ee samaynta qalabka samaynta, jiilka labaad, ficilka mashiinka oo dhan iyo muuqaalka muuqaalka, nooca sanduuqa cabbirka ayaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan. Sanduuqa dhinaceeda ayaa kufiican cadaadiska xumbada ee ay maamusho Sichuan PLC halaga dhigo mid, wo, Taiwan weinview taabashada shaashadda hagaajinta cabirka muuqaalka.
Dejinta otomaatiga ah, jihada dhinaca, cadaadiska, xumbada, sanduuqa gadaashiisa, hal-mar oo shixnad dhameystiran, kororka degdega ah ee qalabka wax lagu beddelo ee dhinta, isbeddelka xawaaraha isbeddelka, wuxuu si weyn u hagaajiyaa waxtarka shaqada, sanduuqyada 800-1200 saacaddii, wuxuu badbaadin karaa 3-4 shaqaale , heerka maalgashiga soo noqoshada waa mid sareeya, inta badan adduunka soo saarayaasha ayaa daboolay qalabka.
1. Wo Chuan PLC xakamaynta qashin-qaadashada: Taiwan weinview shaashadda taabashada shaashadda, hagaajinta wax-soo-saarka buuga-caaryada ayaa lagu kordhin karaa in ka badan kooxaha waqtiga, nuurad kasta waa la hagaajin karaa, aad ugu habboon, dareen badan, waxtar badan.
2. Midka ugu horeeya ee bilaabaya barnaamijka laba-geesoodka ah waa Io oo leh laba dhinac oo ah xumbada cadaadiska dhinaca iyo halbeegga xumbada halbeegga ah, hal furaha furaha si loo gaaro goobooyin cadaadis gooni ah si otomaatig ah isugu laabo oo u riixdo goobooyin, keydinta waqtiga iyo waxtarka, iyo hawlo badan. .lt ayaa ka dhaqaale iyo waxtar badan in la siiyo ciyaar buuxda waxqabadka mashiinka.
3. Qalabaynta aaladda dhimashadu ugu dambeysay: Kordhi I I dhererkiisa hagaajinta caaryada hoose iyo saldhiga caaryada, si weyn u yareynaya waqtiga hagaajinta caaryada.
4. Badbaadinta amniga laba-geesoodka ah: Jiirarka degdegga ah ee dabka waalka korontada ka gooya ayaa si dhakhso leh looga jari karaa waddada gaaska, si ka sii ammaan badan.
5. Waxay leedahay qaabka mashiinka lagu hagaajinayo: waxay xakamayn kartaa ficilka hal dhululubo, waxay ku habboon tahay in la rakibo caaryada oo la hagaajiyo caaryada.
6. Khariidadda baakadda geeskeeda iyo cadaadiska waxaa lagu dhammaystiri karaa hal mar. Si toos ah ayaa loo rari karaa, iyo hawlgalka qadka safka ayaa badbaadin kara shaqo badan. Waxay soo saari kartaa sanduuqyo 800-1200 saacaddii, waxayna kordhin kartaa waxtarka sanduuqa sameynta. Mashiinkaan ayaa korsanaya
7. Wo Sichuan PLC, Taiwan weinview touchscreen, sumadaha wadajirka ah shirkad laga keeno dhululubada, sita mashiinka gudbinta, buufinta geedi socodka paml, waligood painl.
Cabirka ugu badan ee shaqada
Cabirka shaqada ugu yar
Hore: Mashiinka dhejinta otomaatiga ah
Xiga: Mashiinka kulanka si buuxda otomaatig ah
Mashiinka calaamadeynta sanduuqa khamriga